China TIG ịgbado ọkụ Robot Manufacturer na Supplier | Yunhua
TIG ịgbado ọkụ Robot
A na-ejikarị GTAW eme ihe na weld akụkụ dị iche iche nke igwe anaghị agba nchara na ọla na-abụghị nke na-acha ọkụ dị ka aluminom, magnesium, na alloys copper. Usoro a nyere onye na-arụ ọrụ ikike karịa ịgbado ọkụ karịa usoro asọmpi dị ka ịgbado ọkụ arc welding na gas metal arc ịgbado ọkụ, na-enye ohere maka ike, welds dị elu welds. Agbanyeghị, GTAW dị nhịahụ ma sie ike nnabata, yana ọzọ, ọ dị nwayọ nwayọ karịa ọtụtụ usoro ịgbado ọkụ ndị ọzọ. Usoro yiri ya, ịgbado ọkụ plasma arc, na-eji ọkụ ọkụ ịgbado ọkụ dị iche iche iji mepụta arc ịgbado ọkụ nke ọma ma na-arụpụta ihe na-akpaghị aka.
Yunhua jiri usoro mgbochi pụrụ iche n'oge ịgbado ọkụ TIG, ma a ga-enwe akwụkwọ ntuziaka pụrụ iche maka onye ọrụ, naanị ma ọ bụrụ na onye ọrụ nwere ike ịgbaso ntuziaka ahụ, ma mụọ ọtụtụ oge, enwere ike ịmụrụ ngwa ngwa.
Oke nke TIG ịgbado ọkụ welder
Ndenye voltaji / ugboro ole
Atọ-adọ 380V (+/-) 10% 50Hz
Ike ntinye aka (KVA)
Ntinye ederede dị ugbu a (A)
Gosiri nkwado nkwado (%)
DC na oge niile dị ugbu a Gbado ọkụ curren （A）
DC usu Oge kachasị elu （A）
Isi ugbu a （A）
Pulse ọrụ （%）
Pulse ugboro （Hz）
TIG Arc malitere ugbu a （A）
Arc na-akwụsị ugbu a （A）
Oge nke ugbu a na-abawanye （S）
Oge nke ugbu a na-agbada （S）
Oge agba tupu oge （S）
Adịghị mma oge nke gas-akwụsị （S）
Styledị ụdị arc na-akwụsị ugbu a
Nzọụkwụ abụọ 、 Nzọụkwụ anọ
TIG ụgbọelu arc ịke
Hand aak ịgbado ọkụ ịgbado ọkụ ugbu a
Shell ọkwa ọkwa
Yunhua nwere ike ịnye ndị ahịa usoro dị iche iche ịnyefe. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ụzọ ụgbọ mmiri site n'oké osimiri ma ọ bụ site na ikuku dị ka mkpa ngwa ngwa. YOO obi robot nkwakọ ikpe nwere ike izute oké osimiri na ikuku ibu chọrọ. Anyị ga-akwadebe faịlụ niile dị ka PL, akwụkwọ asambodo, akwụkwọ ọnụahịa na faịlụ ndị ọzọ. Onwere onye oru ya nke oru ya bu n’aka na enwere ike inye ndi robot n’odu ahia n’enweghi nsogbu n’ime ubochi iri ato.
Ọ bụla ahịa kwesịrị ịma YOO HEART robot ọma tupu ha azụ ya. Ozugbo ndị ahịa nwere otu robot YOO HEART, onye ọrụ ha ga-enwe ọzụzụ ụbọchị 3-5 n'efu na ụlọ ọrụ YOO HEART. A ga-enwe WeChat otu ma ọ bụ WhatsApp otu, anyị technicians ndị na-ahụ maka mgbe ire ọrụ, eletriki, ike ike, software, wdg, ga-adị. Ọ bụrụ na otu nsogbu emee ugboro abụọ, anyị technician ga-aga ahịa ụlọ ọrụ na-edozi nsogbu. .
Q1. Gịnị bụ ihe kasị mma ngwa maka a robotic TIG ịgbado ọkụ usoro?
A.High-olu, ngwa ngwa dị iche iche dị mma maka ịgbado ọkụ robotic; n’agbanyeghi, obere olu, ngwa di iche-iche nwekwara ike ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na etinyere ya na ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị. Ndị ụlọ ọrụ ga-atụle ụgwọ ọzọ maka ngwa ọrụ iji chọpụta ma ọ bụrụ na sistemụ ịgbado ọkụ robotic nwere ike ịnye nloghachi siri ike na mbido mbụ. Banyere ịgbado ọkụ TIG, ngwa kachasị mma bụ iberibe iberibe na ọla.
Q2. Kedu nke na-eji mma? HF TIG ịgbado ọkụ ma ọ bụ Weli TIG ịgbado ọkụ?
A. Nhọrọ kachasị ewu ewu na nke kachasị mma bụ iji mmalite mmalite dị elu na -emepụta arc dị elu nke nwere ike ionizing ikuku na ijikọta ọdịiche dị n'etiti isi tungsten na mpempe ọrụ. The High Frequency mmalite bụ a aka-obere usoro na-emepụta fọrọ nke nta ofufe ọ gwụla ma tungsten karịrị nkọ ma ọ bụ na amperage agbanweela oke na mmalite. Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ịgbado ọkụ aluminom, na n'ezie bụ naanị nhọrọ a na-anabata. Ọ gwụla ma ịchọrọ ịgbanye Aluminom, ị gaghị enwe mmalite mmalite ugboro ugboro, mana ọ dị mma ịnwe weld AC ma ọ bụ DC ma ọ bụrụ na ịnwere nhọrọ.
Q3. Nwere ike YOO obi TIG ịgbado ọkụ robot iji dịanyā?
A.Yes, anyi bu otu n'ime ndi mmadu nwere ike iji nzacha mgbe mgbado TIG. Ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa na ahịa nwere ike ịgwa gị na a ga-eji robot ha rụọ ọrụ maka ịgbado ọkụ TIG, ị nwere ike ịjụ ya ajụjụ ndị dị ka: esi nyocha HF ?, enwere ike iji robot gị maka ịgbado ọkụ TIG?
Q4. Etu ịtọ ntọala ike mgbe ị na-eji mgbado TIG?
A.Your ịgbado ọkụ igwe kwesịrị ka DCEN (Direct ugbu a electrode ọjọọ) makwaara dị ka ogologo polarity maka ihe ọ bụla na-arụ ọrụ ibe na kwesịrị ka ịgbado ọkụ ma ọ bụrụ na ha ihe bụ ma ọ bụ aluminom ma ọ bụ magnesium. A na-ahazi ugboro ugboro ka ebido nke achọpụtara n'oge a na inverters. Ekwesịrị ịtọ usoro ọfụma ma ọ dịkarịa ala 10 sekọnd kacha nta. Ọ bụrụ na A / C dị, atọrọ ya na ntọala ndabara nke dabara DCEN. Tọọ kọntaktị na amperage switches na ntọala dịpụrụ adịpụ. Ọ bụrụ na ihe dị mkpa iji welded bụ aluminum polarity kwesịrị ka A / C, A / C itule kwesịrị ka ihe 7 na elu ugboro ọkọnọ ga-aga n'ihu.
Q5. Etu esi edozi Gas ọfụma n'oge ịgbado ọkụ TIG?
A. WIG ịgbado ọkụ na-eji inert gas maka echebe ndị ịgbado ọkụ ebe site ofufe. N'ihi ya, a na-ekwupụtakwa gas na-enweghị ihe ọ bụla dị ka ihe nchebe gas. N'ọnọdụ ọ bụla ọ kwesịrị argon na ọ dịghị gas ọzọ na-adịghị arụ ọrụ dị ka neon ma ọ bụ xenon wdg karịsịa ma ọ bụrụ na a ga-arụ ọrụ ịgbado ọkụ TIG. Ekwesiri idobe ya na 15 cfh. Maka ịgbado ọkụ aluminom naanị ị nwere ike iji njikọta 50/50 nke argon na helium.
Nke gara aga: Na-adọnye na ibudata robot HY-1010B-140
Osote: Mig ịgbado ọkụ Robot
8 Axis Robotic ịgbado ọkụ Workstation na abụọ Pos ...